Umlando we-Daringa House I-Oxenberry Farm - I-Airbnb
Umlando we-Daringa House I-Oxenberry Farm
I-indlwana ephelele ibungazwe ngu-Oxenberry
Izwa inhliziyo nomphefumulo kaMcLaren Vale ngokuhlala e-Daringa House engokomlando nase-Colton Cottage ikhaya lokuqala lokuhlala eMcLaren Vale epulazini i-Oxenberry. Yakhiwa ngo-1840 ngabahlali bokuqala uWilliam Colton noCharles Hewitt.
I-Daringa House e-Oxenberry Farm Winery inamakamelo okulala amabili aphindwe kabili (ekubhukheni kwabantu abangu-3/4 kuphela, uma kungenjalo igumbi elilodwa lisetshenziselwa Abantu abayi-1/2) elinamagumbi okugezela aqokwe kanokusho, igumbi lokuhlala elineziko lezinkuni, ikhishi nezindawo zokuwasha. Ine-air conditioning ngokugcwele, i-inthanethi, i-Netflix nama-smart TV. Uvulandi wangasese, utshani nezingadi. Ama-E-Bikes ayatholakala ukuze aqashwe esizeni. Ibhulakufesi elifakwe nsuku zonke esitolo se-Oxenberry noma ukunikezwa komkhiqizo wasendaweni omusha kungahlinzekwa ngesidlo sasekuseni esizilungisela wena ekhishini elikhethwe kahle (ngesicelo sokubhukha kwangaphambili).
I-Oxenberry Café ivulelwa Ibhulakufesi kusukela ngo-10 Am( phakathi nesonto) futhi kusukela ngo-9am ( Ngempelasonto). Ikhishi lamaholide omphakathi livaliwe, ngakho ibhulakufesi litholakala ekamelweni kuphela.
4.95 · 103 okushiwo abanye